Sarontava, Lederhosen ary labiera ok amin'ny sidina Air Canada Toronto mankany Munich
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sarontava, Lederhosen ary labiera ok amin'ny sidina Air Canada Toronto mankany Munich
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Nahazo alalana hiditra ny fiaramanidina Air Canada 77-9 Dreamliner ao amin'ny kilasy 3 rehetra manao Lederhosen na Dirndl ny Bavarianina.
Ny Lederhosen dia vita tamin'ny fomba nentim-paharazana avy amin'ny akora vita amin'ny hoditra, manamora ny fanadiovana azy ireo sy ny fanesorana ny loto sy ny vovoka, rehefa avy niasa mafy iray andro. Lederhosen, noho izany, tamin'ny ankapobeny dia fitafiana kilasy mpiasa izay nitondra dikany manokana ara-kolontsaina sy sosialy tamin'ny kolontsaina sy firenena miteny alemà. Malaza any Bavaria izy ireo, mampiakatra volomaso any amin'ny faritra sisa any Alemana, saingy tokony heverina ho tsy manam-paharoa any Ontario na any Canada sisa.
Taorian'ny fanambaran'ny Governemanta Canada hanokatra ny sisintany iraisampirenena amin'ny 7 septambra, namoaka antsipiriany fanampiny ny Air Canada
ny fandaharam-potoanan'ny sidina Munich (MUC) - Toronto (YYZ) nomaniny.
Ny fanalefahana ny fameperana dia ahafahan'ny teratany vahiny vita vaksiny feno amin'ny vaksinin'ny governemanta Canada (Moderna, Pfizer, AstraZeneca, ary J&J) farafaharatsiny 14 andro talohan'izay ary mahafeno ny fepetra takiana hidirana ao Canada ho an'ny dia tsy ilaina.
Alemanina koa dia mamela ny kanadianina vita vaksiny feno na ireo afaka mampiseho fitsapana COVID ratsy ratsy hiditra any Alemana sy ny faritra Schengen.
Mitafy Lederhosen ho an'ny tompokolahy ary Dirndl ho an'ny tovovavy rehefa manidina tsy mijanona avy any amin'ny tanànan'ny renivohitra Bavaria Munich mankany Toronto dia azo atao raha tsy mampiakatra ny volomaso alemà any amin'ny tanàna hafa ivelan'i Bavaria toa an'i Frankfurt.
Betsaka ny olona any Ontario, Canada, no tia ny Oktobra ary sary Alemanina manao akanjo mandry, lederhosen, ary satroka alemanina, hita toy ny akanjo nentim-paharazana Alemanina Bavarian Oktoberfest.
Lufthansa dia nampifandray an'i Alemana sy Kanada tamin'ny sidina tsy miato, ary ny fanampiana ny mpiara-miasa Star Alliance Air Canada hamerina ny làlany avy any Munich tsy an-kijanona mankany Toronto dia hanampy ity tsena fialamboly sy raharaham-barotra ity.
Munich, Frankfurt, ary seranam-piaramanidina eropeana hafa toa an'i Vienna, Zurich, Amsterdam, Brussels, ary Paris no mifandray amin'i Canada miaraka amin'ny sidina mivantana sy iray.
Mifaninana amin'ity tsena ity ny seranam-piaramanidina sy seranam-piaramanidina ary ireo fiaraha-miasa isan-karazany. Ankoatr'izay, ireo mpitatitra mora sy sarety toy ny Condor dia manompo ny tsena kanadiana kanadiana avy amin'ny seranam-piaramanidina isan-karazany any Alemana sy ireo firenena mifanila aminy.
Ny seranam-piaramanidina lehibe any Alemana dia mbola misy FRAPORT (Frankfurt), fa i Munich ao amin'ny fanjakana atsimo Eoropeana any Bavaria no foibe faharoa manandanja indrindra mampifandray an'i Alemana amin'izao tontolo izao
Saika ny seranam-piaramanidina lehibe rehetra dia mifandray amin'ny rafitra ICE Train, ahafahana mampifandray ireo tanàna lehibe sy seranam-piaramanidina Alemanina ao anatin'ny ora maromaro ary hafainganam-pandeha mihoatra ny 200 km / ora.
“Noho ny famerana ny fivezivezena amin'ny fivezivezena manerana ny tany, dia manolo-tena hanangana ny tambajotra iraisam-pirenena izahay ary hanohy ho mpitatitra manerantany mampifandray an'izao tontolo izao amin'i Canada. Miaraka amin'ny eropeana maniry ny handeha hiverina any Kanada indray izahay, dia vonona ny hampivondrona ny mpanjifany amin'ny fianakaviany sy ny namany, "hoy i Jen-Christophe Hérault, Regional Sales Manager Germany, Switzerland, Austria & Europe atsinanana ao amin'ny Air Canada.
Toy ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka rehetra, ny andro fientanentanan'ny Air Canada sy ny seranam-piaramanidina Munich dia miankina amin'ny zava-misy ankehitriny.
Noho izany, nanampy ny famoahan-gazety nataony ny Air Canada: “Mariho fa ny fandaharam-potoanan'ny varotra Air Canada dia azo ahitsy arakaraka ny takiana amin'ny làlan'ny COVID-19 sy ny fameperana ataon'ny governemanta. Tompon'andraikitra amin'ny fiantohana ny fihaonany rehetra ny mpandeha
ny fepetra takian'ny governemanta, anisan'izany ny fitazonana ny antontan-taratasy fitsangatsanganana, visa, mari-pahaizana momba ny fahasalamana ilaina, ary ny fepetra takiana amin'ny fahazoana mandray sidina rehetra novidiny. Ho an'ny fampahalalana farany indrindra, tsidiho azafady ny Hub momba ny Fampahalalana na ny tranokala IATA's Timatic. Politikan'ny dia: Mametraha toky.
Ny fepetra takian'ny governemanta dia mety hiova tsy misy fampandrenesana kely